ရပ်/ ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အပြီးသတ်ရွေးချယ်မှု ပြည်သူလူထု စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါး | ဧရာဝတီ
ရပ်/ ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အပြီးသတ်ရွေးချယ်မှု ပြည်သူလူထု စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါး
နန်းသီရိလွင်| December 13, 2012 | Hits:115
2 | | ရန်ကုန် ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် အမှတ် ၁၁ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – နန်းသီရိလွင်/ ဧရာဝတီ)
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း အပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ရမည့် ရပ်ကွက်၊ကျေးရွာ (ရပ်/ ကျေး) အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသစ်များ ရွေးချယ်ကြရာတွင် မသမာမှုတချို့ ကြုံတွေ့နေရပြီး ပြည်သူလူထု၏ စိတ်ဝင်စားမှု နည်းပါးနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ အတွင်းက ထွက်ရှိခဲ့သော ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဥပဒေနှင့် အညီ အဆိုပါ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကို အများဆန္ဒနှင့် တင်မြှောက်ရမည် ဖြစ်သော်လည်း ယခင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းများ၏ ၀င်ရောက် စွက်ဖက်မှုများအပြင် မသမာမှုများ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
“ကျနော်တို့ ရပ်ကွက်မှာ အရင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းက ဆယ်အိမ်စု ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရွေးမခံရဘူး။ အရွေးမခံရတော့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ပြဿနာရှာတယ်။ နောက်တော့ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးမယ့် ရက် ၉ ရက်နေ့အစား အခု အကန့်အသတ် မရှိ ရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်။ ဘာကြောင့် ရွှေ့လိုက်တာလဲ၊ ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းက မြို့နယ် အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ပတ်သက်နေလားဆိုတာ ကျနော်တို့ ရပ်ကွက်သူ ရပ်ကွက်သားတွေ သိချင်နေပါတယ်” ဟု ရန်ကုန် မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ် ရေတွင်းကုန်းရပ်ကွက်မှ ဒေသခံ တဦးက ပြောသည်။
ယခင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည့် ရပ်/ ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဟောင်းတချို့က ၎င်းတို့ အရွေးချယ်ခံရရန် မြို့နယ် အာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းခြင်း၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူးများနှင့် တိုင်ပင် ဆောင်ရွက်ခြင်းကဲ့သို့သော နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက် နေမှုများ ရှိသောကြောင့် မိမိတို့၏ ရပ်/ ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ကိုယ်တိုင် ရွေးခြယ်ရမည့် ပြည်သူလူထု ကိုယ်တိုင် စိတ်ဝင်စားမှု နည်းပါးနေကြောင်း သိရသည်။
“ကျနော်တို့ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်မှာက တိုက်ခန်းနေ အများစုဆိုတော့ သာမန် လက်လုပ်လက်စားနဲ့ ဝန်ထမ်းအများစုက ဒီရွေးချယ်ပွဲကိုသိပ်စိတ်မဝင်စားကြဘူး။ ဒါပေမယ့် ရပ်ကွက်ထဲက ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကတော့ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရာထူးကိုလုနေကြတာရှိတယ်။ မက်လည်း မက်စရာကိုး” ဟု ရန်ကုန် ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်တွင် နေထိုင်သည့် ကိုဗေဒါဇော်က ဆိုသည်။
ရပ်/ ကျေး အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၈ အရ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တဦးသည် လစဉ် ချီးမြှင့်ထောက်ပံ့ငွေနှင့် သက်တမ်းကာလ အပြည့် တာဝန်ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ပါက ချီးမြှင့်ငွေများရရှိမည်ဖြစ်ကာ ရုံးအသုံးစရိတ် ရန်ပုံငွေကို နိုင်ငံတော်က ကျခံပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
“တိုက်ခန်းအရောင်း၊ အ၀ယ်၊ အငှား စာချုပ်တွေ ချုပ်တိုင်း ရပ်ကွက် ရုံးကို အနည်းဆုံး ကျပ် တသောင်းတော့ ပေးရတယ်။ ကျနော်တို့ ရပ်ကွက် အနေအထားနဲ့ဆိုရင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရပ်ကွက်ရုံးမှာ စာချုပ် လာချုပ်ရတဲ့ သူက ၁၀ ဦးထက် မနည်း ရှိနိုင်တယ်” ဟု ကိုဗေဒါဇော်က ဆက်ပြောသည်။
ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ အနေဖြင့် အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သည့် နေရာများတွင် လောင်းကစားမှုများ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ အရေးယူနိုင်ရန် အကြောင်းကြားခြင်း၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်များကို အခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေးခြင်း စသည့် အချက်များအပါအ၀င် လုပ်ငန်းတာဝန် ၃၂ ချက်ကို ထမ်းဆောင်ရမည်ဟု ဥပဒေတွင် ဖော်ပြသည်။
“ဓမ္မာရုံမှာ ကြော်ငြာ ကပ်ထားတာ တွေ့ပေမယ့် သိပ်စိတ်မ၀င်စားကြဘူး။ ဆယ်အိမ်မှူး ရွေးရတော့လည်း ဆယ်အိမ်စု တစုကို ၂ ယောက်၊ ၃ ယောက်ပဲ လာတယ်။ လာတဲ့သူကလည်း အိမ်မှာ ကျန်ရစ်တဲ့ အဘိုးအဘွားတွေ များတယ်။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖြစ်ချင်တဲ့သူက လက်ဘက်ရည်တိုက် မုန့်ကျွေးပြီး သူ့ကို မဲပေးဖို့ ပြောတာတွေလည်း ရှိတယ်” ဟု ရန်ကုန် တာမွေမြို့နယ်၊ ပျားရည်ကုန်း ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူ တဦးက ပြောသည်။
ရပ်/ ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ရွေးချယ်ရာတွင် အများပြည်သူ ကြည်ညိုလေးစား၍ သြဇာတိက္ကမ ရှိသည့် ရပ်မိရပ်ဖ ၅ ဦးအားရပ်/ ကျေး ဥပဒေနှင့်အညီ အများဆန္ဒဖြင့် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အဖြစ် ဖွဲ့စည်းရမည်ဖြစ်ကာ ဆယ်အိမ်စုမှူးများကို အများဆန္ဒဖြင့် စတင် ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်သည်။ အရွေးချယ်ခံရသည့် ဆယ်အိမ်စုမှူးများကို ရပ်/ ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဥပဒေ အခန်း (၄)၊ ပုဒ်မ (၈) အရ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးက ရပ်/ ကျေး ဥပဒေတွင် ပြဌာန်းထားသည့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တယောက်တွင်ရှိရမည် အရည်အချင်း များနှင့် ပြည့်စုံပါက ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏အတည်ပြုချက်ကို ရယူပြီး ရွေးချယ် ခန့်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့နယ်အပြင် တခြားသော မြို့ရွာများတွင်လည်း အလားတူအဖြစ်အပျက်များ ရှိနေကြောင်း ဧရာဝတီက စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အစည်းအဝေး ဒီမိုကရေစီနှင့် ရင်ကြားစေ့ရေး အတွက် မူဝါဒ မထုတ်ပြန်နိုင်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Shwe Yoe December 13, 2012 - 1:27 pm	Do the people want Democracy in their neighborhood or what? If they do, they must cast their vote for who are good for the people, not power hungry guys. Silence will not bring good to the people unless they vote the bad people out of politics.
Reply	a December 13, 2012 - 1:54 pm	သာမန်လက်လုပ်လက်စားနဲ့ဝန်ထမ်းအများစုကဒီရွေးချယ်ပွဲကိုစိတ်မ၀င်စားကြဘူးဆိုတော့လူအများစုဖြစ်တဲ့ဒီလိုလူတွေကလုပ်ချင်တာလုပ်နေတာကိုလက်ခံကြပြီး၊စစ်ကျွန်ဘ၀ကိုကျေနပ်နေကြတာလား။(ဒီလိုလူတွေကိုအကောင်း၊အဆိုးဆင်ခြင်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ)။
Reply	yemyn December 14, 2012 - 9:24 am	Myanmar people don’t interest even government in Nay Pyi Daw.
Reply	yemyn December 14, 2012 - 9:31 am	Everything is not people election in Myanmar like constitution law,Government etc.. The real thing is poor people in country wide with golden president home (Nay PYi Daw) shameful!!
Reply	ukyawt December 14, 2012 - 4:10 pm	we don’t interest to this choosingaleader foraquarter,because almost the good men end up for the using by the old government in 50 years.how can we chooseagood man in the bad men.i feel like that.choose..choose what do you like.you’ll get what you don’t like…ha ha
Reply	khingmin December 15, 2012 - 1:45 pm	ရွေးတော့ရော ထူးလာမှာမို့လို့လား ရပ်ကွက်အကျိုးရွာအကျိုးသယ်ပိုးလိုလို့မှမဟုတ်တာ ကိုယ်ကောင်းစားဖို့ကိုယ်ကျော်ကြားဖုိ့လုပ်နေကြတဲ့အတ်တသမားတွေကများနေတာရပ်အကျိုးရွာအကျိုးကြည့်မဲ့သူဆိုရင်နေကုန်ရင်ကုန်ပါစေမဲပေးခြင်ပါသေးတယ်